Abafundi abebebambe iqhaza emkhankasweni we-GirlCAD; ne-WomEng Booklet kanye nomakalabha.
Abezobunjiniyela Bemishini Baqale Umkhankaso Wokucobelela Ngolwazi Amantombazane Asakhula i-GirlCAD!
Umkhankaso i-GirlCAD we-South African Institute of Mechanical Engineers (SAIMechE) ububanjelwe ekhempasini i-Howard College.
I-GirlCAD iwumkhankaso wegatsha labafundi le-SAIMechE e-UKZN lapho kufundiswa khona izingane zamantombazane zasezikoleni zaseThekwini namaphethelo ngohlelo lwe-Computer Aided Drawing (CAD). Lolu hlelo beluhlelwe uLindelwa Dlamini no-Michael Geytenbeek njengengxenye yezinhlelo zokulekelela imiphakathi ze-SAIMechE.
‘Uma amantombazane engena emkhakheni wezobunjiniyela asuke engenalo ulwazi lokudweba kwezobuchwepheshe, okwenza kube nzima ukuthi bangene ngokugcwele ezifundweni zabo. Lolu hlelo lunesifundo esiyihora ubude kanye nesifundokubuyekeza lapho amalungu enhlangano elekelela ngokubuyekeza isifundo,’ kusho uDlamini.
Lolu hlelo luthole ukuxhaswa yi-Women in Engineering (WomEng), okuyinhlangano yomhlaba ezinikele ekuthuthukisweni kwabesifazane emisebenzini emikhakheni yeSayensi, Ubuchwepheshe, Ubunjiniyela kanye Nezezibalo (STEM). ‘Basixhase ngomakalabha abaphinki, izikhwama kanye nezincwajana ezikhuluma ngabesifane ku-STEM lapho u-Shivashni Pillay ebemele i-WomEng futhi ungumxhumanisi wesifundazwe we-GirlEngineering,’ kusho uDlamini.
Lolu hlelo luqale kuNcwaba 2017 futhi lwathola nemvume kuSolwazi G Bright nokwelekelelwa uMnu Shaun Savy. Wonke amantombazane avumelekile ukubamba iqhaza, okudingekayo nje kuphela ukuthi benze isifundo sezibalo futhi babenothando lwemisebenzi eku-STEM.
‘Lolu hlelo silwethula ngoba izikole eziningi zamantombazane azisifundisi isifundo sokudweba kwezobuchwebeshe. Ngaphandle kwezikole ezimbili, abafundi kumele babe sezikoleni ezixube ubulili ukuze bafunde ukudweba kwezobuchwepheshe. Lolu hlelo silwakhele abafundi bamabanga u-Grade 11 no-Grade 12,’ kusho uDlamini.
Amagama: NguManqoba Hadebe
Trafficking in Persons (TiP) and Violence Against Women and Children Highlighted at Seminars
Abaphathi Bathole Ukucijwa Ngokuqeqeshwa KwezobuHoli e-UKZN
UKZN Epidemiologist Appointed onto WHO Taskforce
Criminology and Forensic Studies hosts visiting Scholars from Sweden
Kingdom Rhinos Fly the Flag High at Volleyball Tournament